टीकापुरमा गठबन्धन र एमालेलाई यसरी चुनौती दिँदैछ रेशम चौधरीको पार्टी
- जनक नेपाल | मंगलबार, चैत २२, २०७८
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा पूर्वी नगरपालिका टीकापुरमा ३० वैशाखको स्थानीय चुनावमा लालझण्डा फहराउने कि हरियो ? अघिल्लो चुनावका प्रत्यासी दलहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र चुनावी माहौल आफ्नो पक्षमा पार्न घरदैलो गरिरहेका छन् ।
झट्ट हेर्दा एमाले र सत्ता गठबन्धनबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिए पनि टीकापुर घटनाको सहानुभूति बटुल्दै भित्रभित्रै शक्ति आर्जन गरिरहेको छ– सांसद रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी । सो पार्टीको अर्थपूर्ण उपस्थितिले परम्परागत प्रतिस्पर्धी दलहरूको चुनावी गणित तलमाथि पार्न सक्ने अनुमान स्थानीयले गर्न थालेका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनले टीकापुरको भागवण्डा टुंग्याइसकेको छैन । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैले टीकापुरको मेयरमा दाबी गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट मेयरका आकांक्षी ललितबहादुर थापा यसपटक टीकापुरमा माओवादीको लालझण्डा फहराउने दाबी गर्छन् । ‘कैलालीका दुई केन्द्र धनगढी र टीकापुरमध्ये एउटा हामी छाड्दैनौँ,’ उनले भने, ‘दुवै ठाउँ छाडेर गठबन्धन गर्नुको अर्थ रहन्न । कांग्रेसले धनगढी नछाड्ने भनिसकेपछि टीकापुर हामीले छाड्न मिल्दैन ।’
थापा २०७४ को निर्वाचनमा पनि मेयरका उम्मेदवार थिए । त्यसैले आफू घाइते उम्मेदवार रहेकाले पार्टीले आफूलाई नै अघि बढाउने र जिताउनेमा उनी विश्वस्त छन् । ‘जनयुद्ध लडेर पार्टी र वाईसीएलमा काम गरेर आएको हो । अघिल्लो पटक धेरै मत बदर भई प्राविधिक रूपमा मात्र हारेको हो,’ थापाले भने, ‘यसपटक धेरै मेहनत गरेका छौँ ।’ थापासँगै माओवादी केन्द्रबाट विकास चौधरी र खड्ग शाह पनि मेयरका आकांक्षी छन् ।
अघिल्लो चुनावमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ले हाराहारीमा मत ल्याएका थिए । एमालेका तपेन्द्रबहादुर रावलले ५ हजार ९ सय ५९ मतसहित विजयी हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी फोरम लोकतान्त्रिकका लौटन चौधरीले ५ हजार ५ सय ३४ मत ल्याएका थिए । तेस्रो धेरै मत ल्याउने कांग्रेसका जंगबहादुर साउदले ५ हजार ५ सय १४ र चौथो अधिक मत माओवादी केन्द्रका ललितबहादुर थापाले ५ हजार ५ सय १० मत ल्याएका थिए ।
उपमेयरमा समेत प्रतिस्पर्धा रोचक बनेको थियो । कांग्रेसकी केशरीकुमारी रावल ६ हजार २ सय २६ मतले विजयी हुँदा माओवादी केन्द्रकी आशाकुमारी ५ हजार ५ सय ५३ मतसहित निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बनेकी थिइन् । उनलाई ५ हजार ३ सय ९५ मतले एमालेकी कमला केसीले पछ्याएकी थिइन् भने फोरम लोकतान्त्रिकका सुदेशनी चौधरी ५ हजार २ सय ७७ मतसहित चौथो स्थानमा थिइन् । टीकापुर नगरपालिकामा अहिलेको मतदाता संख्या ५२ हजार ८ सय ७२ छ ।
कांग्रेसका मेयरका आकांक्षी नवराज रावल पाँच वर्षमा जनमतमा आएको हेरफेरले आफ्नो पार्टी सबैभन्दा बलियो शक्ति रहेकाले गठबन्धनका नाममा टीकापुर छाड्न नसक्ने बताउँछन् । २०७४ को स्थानीय चुनावको जनमतलगत्तै भएको प्रदेश र संघको चुनावमा फेरिएको उनी दाबी गर्छन् । विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) र कांग्रेसबीच एकता भएपछि टीकापुरमा कांग्रेसको भोट त्यतिबेलै १० हजार पुगेको उल्लेख गर्दै रावल भन्छन्, ‘एमाले–माओवादी केन्द्र एक भएर प्रदेशको चुनावमा आउँदा पनि हामीले १ हजारको अन्तरले चुनाव जितेको आधारले पनि कांग्रेसले टीकापुर छाड्न मिल्दैन ।’
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नं. १ (ख) बाट कांग्रेसका डा. रणबहादुर चन्द एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई पराजित गर्दै विजयी भएका थिए । ‘हामी सत्ता गठबन्धनको साथ लिएर वा एक्लै लडेर भए पनि टीकापुरमा यसपटक कांग्रेसको हरियो झण्डा फहराउँछौँ,’ रावलले भने । कांग्रेसबाट रावल, राजु हमाल र वर्तमान उपमेयर केशरी रावल टीकापुरको मेयरका लागि आकांक्षी छन् ।
वर्तमान मेयर तपेन्द्रबहादुर रावल एमालेबाट दोहोरिने कसरतमा छन् । सामाजिक सद्भाव भड्किने बिर्सनलायक घटना बेहोरेको उदीयमान नगरमा आफूले निर्विवाद काम गरेकाले स्थानीयस्तरबाटै दोहोरिन आग्रह गरिएको उनी बताउँछन् । ‘स्थानीय तह नयाँ अभ्यास हो । चाहेजति काम हुन नसके पनि निर्विवाद र विकास निर्माणमा सबैलाई सँगै लिएर हिड्ने कोसिस मैले गरेँ,’ रावलले शिलापत्रसँग भने, ‘घोषणापत्रका अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गरेको छु । शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारमा काम भएका छन् । पार्टीले आवश्यक ठाने म दोहोरिन चाहन्छु ।’
कार्यकाल पाँच वर्षको भए पनि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल व्यवस्थित रूपमा दुई वर्ष पनि सञ्चालन गर्न नपाइएकाले मेयरमा दोहोरिने इच्छा व्यक्त गरेको उनी बताउँछन् । ‘पहिलो वर्ष ऐन कानुन बनाउँदैमा अलमलमा बित्यो । बीचका दुई वर्ष कोभिड महामारीले काम गर्न पाइएन । त्यसैले दोहोरिने इच्छा हो,’ मेयर रावलले भने ।
एमालेबाट जिल्ला सचिवालय सदस्य श्याम खत्री टीकापुर नगरपालिकाको मेयरका लागि अर्का बलिया आकांक्षी हुन् । दुईपटक नगर अध्यक्ष र इन्चार्ज भइसकेका उनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अगुवासमेत हुन् । यसपटकको स्थानीय चुनावमा एमाले, गठबन्धन र रमेश चौधरीको पार्टीबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने दाबी गर्दै खत्री भन्छन्, ‘अहिले एमाले एक्लै बलियो छ । सरकारी गठबन्धन कसरी आउँछ, त्यो हेरेर रेशमजीको पार्टीसँग हाम्रो तालमेल पनि हुन सक्छ ।’
नेकपाको निरन्तरताका रूपमा माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ता एमालेमै रहेको र पार्टी विभाजनको झिनो असर पूर्ति भइसकेको दाबी गरिरहेको एमालेका लागि सत्तारुढ दलहरूको गठबन्धनले कठिनाइ थपिएको छ । पालिका भागवण्डाको गाँठो फुकाएर एकमतका साथ मैदान आउन गठबन्धन दलहरूलाई पनि सजिलो छैन । यो स्थितिमा रेशम चौधरीको नयाँ दलले जनमत आफूतर्फ तान्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
भर्खरै खुलेको चौधरीको पार्टीबाट टीकापुरको मेयरका आकांक्षी भने पुराना नेता र यसअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । टीकापुर वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष लालवीर चौधरी, वडा नं. ७ बाट निर्वाचित रामलाल चौधरी र कार्यपालिका सदस्य रमेश नेपाली नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मेयरका मुख्य आकांक्षी हुन् । रामलाल माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुन् भने लालविर फोरम लोकतान्त्रिक र नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य हुन् । ‘२५ चैतभित्र हामी उम्मेदवार टुंग्याउँछौँ,’ सो पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मण चौधरीले शिलापत्रसँग भने, ‘हामी टीकापुर जित्नेगरी तयारीमा छौँ ।’
कैलालीलाई ‘अखण्ड’ सुदूरपश्चिममा नराख्न र छुट्टै थरुहट प्रदेशको माग गर्दै ७ भदौ २०७२ मा थारू समुदायले गरेको प्रदर्शनमा हिंसा भड्किएको थियो । त्यस क्रममा सात प्रहरी र एक बालक मारिएपछि राज्यबाट थारु समुदायमाथि चर्को दमन गरियो । टीकापुर घटनाका योजनाकारको आरोप लागेका रेशम चौधरी २०७४ को निर्वाचनमा कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार भए र फराकिलो मतान्तरसहित विजयी भए । तर, जिल्ला र उच्च अदालतले उनलाई दोषी करार गरेपछि अहिले पनि डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।
चौधरीले चुनाव जितेको पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकता भई जनता समाजवादी पार्टी बन्यो र पुनः विभाजनसमेत भयो । आफ्नो रिहाइका लागि ती पार्टीले राम्रो भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै उनले श्रीमती रन्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरेका हुन् । सो पार्टी स्थानीय तह चुनावमा कैलालीका टीकापुर, जोशीपुर, भजनीलगायतका थारूबहुल पालिकामा निर्णायक देखिएको छ । ‘हाम्रो टार्गेट कैलालीका सात पालिका जित्ने हो । टीकापुरसहित चार वटामा जित सुनिश्चित छ, अरुमा पनि मेहनत गर्दैछौँ,’ संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मण चौधरीले भने ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २२, २०७८, २१:०६:००